China Easy nwụnye UV Nguzo N'èzí WPC Cladding emepụta na suppliers | Lihua
Mfe nwụnye UV Nguzo N'èzí WPC Cladding
Nwee ngwaahịa: WPC Cladding
Nkebi nke: LSC15621
Mentkwụ ụgwọ: TT / LC
Ahịa: $ 1.47 / M
Agba: Unyi, Agba ntụ, Agba aja, Osisi Red, Kọfị, Cedar.
Port Mbupu: Shanghai Port
Ebute ụzọ: 7-20 7BỌCH.
Super Market, obodo nta, Ogige
Anyị WPC mgbidi cladding mara mma na mara ọdịdị osisi ọka udidi, aka na mfe echichi, si otú ahụ nwere ike izute dị iche iche chọrọ nke customers.It nwere ike kwocha ya ntu, kpọpu na bee dabara ngwa nke dị iche iche nkọwa, dị ka odida obodo, n'èzí ubi, ogige, nnukwu ụlọ ahịa, wdg.
Anyị WPC mgbidi cladding bụ gburugburu ebe obibi enyi na enyi, n'ụzọ zuru ezu recyclable na ọ dịghị ọzọ ize ndụ chemical, ọ dịghị mkpa sere, ọ dịghị mama na ala mmezi.
Mgbidi mgbidi anyị nwere ikike ihu igwe dị mma, ọ nwere ike ịdị mma site na -40 ℃ ruo + 60 O .Ihe mgbochi WPC anyị na-eguzogide ihu igwe, mgbochi mmịcha, obere mgbawa, ogologo, enweghị akpụkpọ ụkwụ enyi .Plus UV mgbakwunye na-eme ka mbadamba anyị dịgide UV, Ezi akụkụ kwụsie ike megide mmiri na okpomọkụ.
WPC mgbidi cladding na a eke osisi anya maka ụlọ n'èzí, anyị WPC mgbidi cladding nwere ọtụtụ nkọwa iji mejuo dị iche iche ndị ahịa mkpa na chọrọ. WPC mgbidi cladding nwere mma n'ibu arụmọrụ. Emegharịrị 100%, enyi na enyi, na-echekwa oke ohia. Agba na nha nwere ike ahaziri gị mkpa, biko chere free ịjụ anyị.
Resistanceda iguzogide oke mmetụta EN 15534-1: 2014 Nkebi 7.1.2.1 EN 15534-5: 2014 Nkebi 4.5.1 Enweghị nke ụdị ga-egosi ọdịda Onweghị nke gbawara agbawa nke ule ahụ
Njirimara mgbanwe EN15534-1: 2014 AnnexA EN 15534-5: 2014 Nkebi 4.5.2 Ntughari n'okpuru ibu nke 500N ≤5.0mm Ike ekwe Ike Oke kachasị na mgbaji Ihu Ihu: Ibu kachasị: Nkọwa 1906N na 250N: Pụtara 0.64mm Ihu Ihu: Ibu Ibu: Pụtara 1216N Nkpuchi na 250N: 0.76mm
Mgbu mmiri na mmiri mmiri EN 15534-1: 2014 Nkebi 8.3.1 EN 15534-5: 2014 Nkebi 4.5.4 Mgbapụta pụtara: ≤10% na ọkpụrụkpụ, -1.5% n'obosara, -0.6% n'ogologo Max ọzịza: ≤12% na ọkpụrụkpụ, ≤2% n'obosara, -1.2% n'ogologo Mmiri mmiri: Pụtara: ≤8%, Max : ≤10% Mgbapu Ọbara: 2.25% na ọkpụrụkpụ, 0.38% n'obosara, 0.15% n'ogologo Max Ọcha: 2.31% n'obosara, 0.4% n'obosara, 0.22% n'ogologo Mmiri mmiri: Pụtara: 5.46%, Max: 5.65%
Linear thermal mgbasa ọnụọgụ EN 15534-1: 2014 Nkebi 9.2 EN 15534-5: 2014 Nkebi 4.5.5
Pụtara: 46.8 x10⁻⁶ K⁻¹
Sere site na nguzogide EN 15534-1: 2014 Nkebi 7.7 EN 15534-5: 2014 Nkebi 4.5.6 Ike na ọdịda: 479N, Uru pụtara: 479N, Ọnọdụ ọdịda: 479N Enwere mgbape na ule ule
Mgbanwe okpomọkụ EN 15534-1: 2014 Nkebi9.3 EN 479: 1999 EN 15534-5: 2014 Nkebi 4.5.6 Okpomọkụ Ule: 100 ℃ Pụtara: 0.09%
Nke gara aga: Ego dị irè 3D Deep Embossed Wood WPC Wall Cladding
Osote: Mpụga Wood mejupụtara WPC Fireproof Wall Panels
Q: Kedu ụdị akwụkwọ asambodo ị gafere?
Azịza: LiGS ejirila SGS jiri EU WPC nwalee ụkpụrụ njikwa EN 15534-2004 nwalere, EU ọkụ ọkwa ọkọlọtọ na ọkwa ọkụ B, American WPC na ASTM.
Azịza: anyị na-gbaara na ISO90010-2008 Quality Management System, ISO 14001: 2004 gburugburu ebe obibi management usoro, FSC na PEFC.
Q: Kedu ndị ahịa ị gafere na nyocha ụlọ ọrụ?
A: customerfọdụ ndị ahịa si GB, Saudi Arab, Australia, Canada, wdg abịawo na ụlọ ọrụ anyị, ha niile nwere afọ ojuju maka ogo na ọrụ anyị.
Q: Gini bu usoro nzụta gi?
A: 1 họrọ ihe dị mma anyị chọrọ, lelee ogo ihe dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị
2 lelee ihe eji eme ihe na usoro anyi choro na asambodo
3 na-anwale ihe, ọ bụrụ na ọ gafere, mgbe ahụ ga-etinye usoro.
Ajụjụ: Gịnị bụ ụkpụrụ nke ndị na-eweta ụlọ ọrụ gị?
A: Ha niile kwesiri idowe nguzo nke ulo oru anyi choro, dika ISO, enyi na enyi gburugburu ebe obibi, oke mma, wdg.
Q: Ogologo oge ole ka nkedo gị na-arụ ọrụ nke ọma? Olee otú ịnọgide na-enwe kwa ụbọchị? Kedu ihe ike nke usoro ọnwụ ọ bụla?
A: Ọtụtụ mgbe, otu ebu nwere ike ịrụ ọrụ ụbọchị 2-3, anyị ga-echekwa ya mgbe usoro ọ bụla gasịrị, ikike nke usoro ọ bụla dị iche, maka mbadamba nkịtị otu ụbọchị bụ 2.5-3.5ton, 3D embossed products is 2-2.5tons, co- ngwaahịa extrusion bụ 1.8-2.2tons.
A: 1.Mee n'aka nke na agba nke iji na ahịa
Ọrụ aka kwadebe usoro na-eme a sample iji gosi na agba na mgbe ọgwụgwọ na ndị ahịa
Mgbe ahụ mee granulation (Kwadebe ihe), wee malite imepụta, a ga-etinye ngwaahịa extrusion na ebe a kapịrị ọnụ, emesịa anyị ga-eme mgbe a gwọchara anyị, anyị ejirizie ndị a.
Q: Ogologo oge ole ka oge nnyefe nke ngwaahịa gị?
A: Ọ ga - adị iche na nke ukwu, n'ozuzu ọ bụ ihe dị ka ụbọchị 7-15 maka otu 20ft akpa .Ọ bụrụ na 3D embossed na co-extrusion ngwaahịa, anyị kwesịrị 2-4 ụbọchị ọzọ n'ozuzu dị ka Mgbakwunye usoro.
Q: you nwere opekempe iji buru ibu? Ọ bụrụ otu ahụ, kedụ opekata mpe ihe ole na ole?
A: Na mkpokọta anyị nwere opekempe dị, ọ bụ 200-300 SQM.Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịjuju akpa ahụ na oke ịgba, ụfọdụ ngwaahịa ole na ole anyị ga-emere gị ha!
Q: Gini bu ikike gi?
A: N'ozuzu anyị ngụkọta ikike bụ 1000 tọn kwa ọnwa.As anyị ga-mmako ụfọdụ ndị ọzọ mmepụta edoghi, nke a ga-amụba ke ukperedem.
mpụga mgbidi cladding
N'èzí WPC mgbidi cladding
WPC na-ekpuchi maka mputa
WPC mejupụtara mgbidi cladding
WPC mputa mgbidi mputa
Eco Enyi na WPC Igwu Pool Gburugburu Ebe di na ...
Good Weather Ike Anti-corrosion mejupụtara W ...
Fireproof No Eserese WPC Wall Panels N'ihi Mpụga
Waterproof mejupụtara Osisi WPC Flower ite N'ihi ...
Fireproof N'èzí mejupụtara WPC oghere Decking
3D Embossed UV Nguzogide mejupụtara WPC Decking
WPC mejupụtara decking, WPC decking n'ala, WPC ụlọ, osisi plastic mejupụtara decking, WPC n'èzí decking, N'èzí WPC decking,